विपी राजमार्गको २२ स्थान जोखिममा, सडक विभागले स्तरोन्नती गर्दै - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
विपी राजमार्गको २२ स्थान जोखिममा, सडक विभागले स्तरोन्नती गर्दै
मङि्सर १५, २०७४ 3721 ऊर्जा खबर/काभ्रे
बनेपाबाट छोटो दूरीमा बर्दीबास तथा पूर्व जाने विपी राजमार्गको २२ स्थान जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । गत दुई वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पपछि जापानी विज्ञले गरेको अध्ययनले जोखिम पत्ता लगाएको हो ।
भूकम्पले भत्काएका विभिन्न ठाउँमा अहिले सडक विभागले मर्मत गर्दै आएको छ । १ सय ६० किलोमिटर लामो विपी राजमार्गका जोखिममध्ये केही स्थान मर्मत भइसकेको विभागका सहायक प्रवक्ता रमेशकुमार सिंहले बताए ।
जापनिज टोलीले पहिचान गरेमध्ये १४ स्थानलाई उच्च र ८ स्थानलाई जोखिमयुक्त औंल्याइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले राजमार्गमा १७ सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । तर, यो नियम पालना भएको छैन ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन १० टनभन्दा बढी क्षमताका सवारी गुडाउनेलाई कारबाही गर्ने पनि विभागले जनाएको छ । यस्तै, काठमाडौंदेखि धुलीखेल, खुर्कोट, सिन्धुली बर्दिबास तथा पूर्व जाने यात्रुबस राती गुड्न नपाउने नियम छ ।
सुनकोसी नदीको किनारै–किनार निर्माण गरिएको राजमार्गमा १० टनभन्दा ठूला गाडी गुडाउन नहुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित प्राविधिक समितिले निचोड निकालेको थियो ।
जापानको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/०५४ देखि राजमार्गको काम सुरु भएको थियो । काम सुरु भएको करिब १८ वर्षपछि अर्थात् २०७१/०७२ मा पूरा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजमार्गको उद्घाटन गरेका थिए ।
यातायात व्यवस्था विभागले १० टनभन्दा बढीका सवारी गुड्न रोक लगााए पनि नेपालथोक–धुलिखेल खण्ड ट्रिपरका कारण जिर्ण भइसकेको छ । हाल यस सडकमा टाटा–सुमो, हायसलगायत सवारी गुड्ने गरेका छन् ।